“လူသိနည်းတဲ့ Touch Screen အလုပ် လုပ်ပုံ” - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
“လူသိနည်းတဲ့ Touch Screen အလုပ် လုပ်ပုံ”
ဖုန်း (သို့မဟုတ်) တက်ဘလက်တွေမှာ Touch Screen တွေ အလုပ် ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတာ မပြောခင် အရင်ဆုံး သိထားသင့်တာလေးတွေ ပြောပါရစေ။
Touch Screen ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ ?
Touch Screen ဆိုတာကတော့ လက်နဲ့ ထိလိုက်တိုင်း ထိလိုက်တဲ့နေရာကို အတိအကျ အာရုံခံနိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်ကို Touch Screen လို ခေါ်ပါတယ်။
Display ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ ?
Display ဆိုတာကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်လို့ ယေဘုယျပြောလို့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ၊ App တွေ၊ သီချင်းတွေ အစရှိတာတွေကို မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Display ဧရိယာထဲမှ တစ်နေရာရာကို လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ ထိတဲ့နေရာအတိအကျကို အာရုံခံအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ အရာကိုတော့ Touch Screen လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလို လက်နဲ့ထိလိုက်တိုင်း Touch Screen တစ်ခု အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြားခံအရာတွေလိုအပ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ LCD panel ပါ။ LCD panel မှာ လက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့နေရာတွေကို အတိအကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် layer များစွာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီ layer တွေမှ တစ်ဆင့် ဖုန်းရဲ့ OS လို့ခေါ်တဲ့ Operating System က ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှသာ ကြည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း အစရှိတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LCD ရဲ့ layer တွေက ဘာတွေလဲ ?
LCD တစ်ချပ်မှာ Layer တွေရှိပါတယ်။ LCD တစ်ချပ်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာတော့ Liquid Crystal Layer ရှိပြီး Glass Plate ၊ Polarizer ၊ Color Layer တို့နဲ့ ညှပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီ LCD ပေါ်မှာ ပုံရိပ်တွေ ပြတ်သားစွာ ပေါ်လွင်ဖို့ အလင်းပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ LED မီးသီးငယ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ LED မီးသီးငယ်လေးတွေ များစွာ LCD panel နောက်မှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရပါတယ်။
LCD Screen ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ ?
LCD Screen မှာတော့ Screen အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ (အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်မျိုးထပ်တိုးလာပါတယ်) TFT (Thin Film Transistors) နဲ့ AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Super AMOLED အထိ အသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ LCD တွေမှာ နောက်ထပ် Layer တွေနဲ့ ဖုံးအုပ် ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီ layer တွေပေါ် မူတည်ပြီး Touch Screen နှစ်မျိုး ကွဲသွားပါတယ်။ Resistive နဲ့ Capacitive တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Touch Screen ကတော့ ဖိအားကို အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကတော့ LCD panel ပေါ်မှာ ပါးလွှာပျော့ပျောင်းပြီး ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ ပလပ်စတစ်ပြား (polyester) နှစ်ချပ်နဲ့ ဖုံးအုပ်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီ့ Polyester နှစ်ချပ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို Indium Tin Oxide (ITO) ကို သုတ်လိမ်းထားပါတယ်။ ဒါကတော့ လျှပ်ကူးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ချပ် ထိမိ လျှပ်ကူးမှသာ ထိကပ်သွားတဲ့နေရာ (X,Y Coordinate) ကို Operating System ထံ ပေးပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Coodinate Point ကို ကြည့်ပြီး OS က ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
အပေါ်က Resistive နဲ့ မတူတဲ့အချက်က LCD panel ရဲ့ အပေါ်ဆုံးအလွှာက ဖန်သားပြင် Glass Layer ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်က ဖိအားကို အခြေခံတာ မဟုတ်တော့ဘဲ လျှပ်ကူးခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံ တွက်ချက်လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Device အများစုမှာတော့ PCT လို့ ခေါ်တဲ့ Projected Capacitive Touch Technology ကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ Capacitive အမျိုးအစားမှာလည်း ITO ပါဝင်ပါတယ်။
ITO တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတော့ Resistive တုန်းက တည်ဆောက်ပုံနဲ့မတူတော့ဘဲ Layer နှစ်ခုကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထောင့်မှန်ကျအောင် နေရာ ချတည်ဆောက်ပါတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လေးထောင့်ကွက်ပုံစံ ငယ်လေးတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ့ Layer နှစ်ခုရဲ့ လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းတွေ ဆုံတဲ့နေရာမှ (X,Y coordinate Point) တွေ ရရှိလာပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီ မျက်နှာပြင်ကို ထိလိုက်တဲ့နေရာမှ (X,Y) ဆုံမှတ်ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံမှတ်ရရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ဒီဆုံမှတ်တွေ ဘယ်ကို ထိသလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ Mutual Capacitance နည်းပညာကို အသုံးပြုရပါတယ်။ သူကတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ် သိုလှောင်ထားနိုင်တဲ့ နေရာလို့ သီအိုရီအရ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေးထောင့်ကွက်ပုံစံငယ်များမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်လွှတ်ပေးခြင်းဖြင့် layer နှစ်ခုကြားမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ ကိန်းအောင်းစေပါတယ်။ Capacitive Layer ထဲမှာ Touch Controller Chip ကိုလည်း ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားပြန်ပါတယ်။ ဒီ Layer တွေကို စုပေါင်းပြီး Capacitive Layer လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ Capacitive Touch Screen အသုံးပြုသူကတော့ Screen ကို လက်နဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့တင် လက်က ထွက်တဲ့ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့် ဆုံမှတ်နေရာမှာ Capacitance တန်ဖိုး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကို Controller Chip က ဘယ်နေရာကို ထိသလဲဆိုတာ ရှာဖွေသိရှိပြီး OS ကို သတင်းပို့ပါတယ်။ OS ဆီရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Touch Screen ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ပြီးမြောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘလက်တွေရဲ့ Touch Screen တွေ အလုပ် လုပ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး ရှင်းလင်း ဖော်ပြပေးထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာ အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါခဲ့ရင်လည်း နားလည်ပေးဖို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Share ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ….။
Ref : Wikipedia,techxplainer,touchscreensolution,sky-technology
More in this category: « မကြာမီလာတော့မယ့် Xiaomi ရဲ့ Brand အသစ် …. Nokia ဝယ်မယ်ဆို ဒါလေးတွေ သိပြီးပြီလား »